Prof. Cali Maxamed Geedi oo Dib u Dhacay ku yimid safarkii uu Marar Badan ku Imaan Lahaa Muqdisho
Buluugleey,Saturday, October 01, 2005
Imaashaha Prof. Geedi ayaa waxey hadalheyntiisu ku badan tahay oo keliya Xusseen Caydiid, wuxuuna Xusseen ku celceliyey marar hore inuu Muqdisho u soo gaarayo Prof. Geedi. Xusseen ayaa hadda dib u soo cusbooneysiiyey imaashaha Geedi wuxuuna sheegay in todobaad gudihiisa magaalada Muqdisho ay ku soo fool leeyihiin wafdi uu hoggaaminayo Prof. Cali Maxamed Geeddi oo ka kooban grabka Jowhar oo ah taageerayaasha Col. Cabdullaahi Yusuf.
Waxaa laga war helay in dib u dhaca badan oo ku yimid safarka Prof. Geedi ay ugu wacneyd khilaaf xoogan oo u dhexeeya Col. C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Prof. Cali Max’ed Geedi, kaas oo la xiriira qaabka loo xalinayo dhameynta khilaafka u dhexeeya garabyada hubeysan ee ka soo kala jeeda magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar.
Prof. Geedi ayaan sinaba ku qanacsaneyn in dagaal lagu dhameeyo khilaafka labada garab, taas oo ay ka soo horjeedaan Col. Cabdullahi iyo Maxamed Dheere. Labadaan dagaalooge oo dadaal badan ugu jira iney dagaal oogaan ayaa ku adkeysanaya in dowlada loogu yimaado Jowhar oo wixii deeqana ay halkaas ku maamushaan garabkoodu. Waxeyna labadaas nin shaki weyn ka qabaan in haddii uu Prof. Geedi dego Muqdisho in isbedel ay ku imaaneyso siyaasada Prof. Geedi, taasna ay horseedi karto burbur ku yimaada garabka Jowhar.
Waxaa kaloo muuqta sadaal ifineysa in Prof. Geedi uu damacsan yahay inuu meel dhexe ka istaago garabyada isku haya loolanka awooda ee ka soo kala jeeda Muqdisho iyo Jowhar. Waxaana laga yabaa inuu dego Villa Somalia oo uu garab ka dhigto Xusseen Caydiid oo hadda u muuqda inuu meel dhexe ka taagan yahay muranka u dhexeeya labada garab. Haddii uu sidaas sameeyo wuxuu Prof. Geedi ka badbaadaya isbaheysiga labada kooxood oo aad u hubeysan inuusan midna u noqon laheyste ku qasban inuu raaco aragtidooda.
Waxaa la xaqiijiyey in Kulan looga hadlayey sidii loo soo dhaweyn lahaa Prof. Geedi uu ka dhacay Villa Somalia, Kulankaas ayaa laysku afgartay in guddi ka kooban 12 xubnood loo magacaabo soo dhaweynta Prof. Geeddi oo ay sheegeen inuu dhowaan imaanayo Muqdisho. Xuseen Ceydiid ayaa sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo xubnaha garabka Muqdisho ku sugan iyo kuwa Jowhar iney isu soo dhowaan doonaan, oo khilaafaadka ka dhexeeya la dhameyn doono. Xuseen Ceydiid wuxuu ku tilmaamay ciidamada lagu xareyey magaalada Jowhar in aysan aheyn kuwo sharci ah, waxaana loo baahan yahay buu yiri marka la xareynayo ciidamo qaran in baarlamaanka la soo marsiiyo, si markaa uu baarlamaanka u ansixiyo.
Col. Cabdullahi ayaa qaba inaan Muqdisho loo kala dhuuman oo ay sugaan inta ay garabkoodu xoog yeelanayaan, dabadeedna iyaga oo wada socda degaan Muqdisho marka ay ka furtaan gacmaha dagaaloogayaasha ka soo horjeeda garabkooda. Waxaa kaloo isi soo taraya walaaca uu ka qabo Col. Cabdullahi in lagu cidleeyo magaalada Jowhar oo dadaal badan ay gelisey beeshiisu.
Khilaafkaan ayaa wax uu sii kordhay markii uu Col. Cabdullahi soo jeediyay in xubno ka tirsan garabkiisa oo xigta ahaan isaga aad ugu dhow ay tahay iney ku wehliyaan tegitaankiisa Xamar, kaddibna in wixii warbixin ah oo ay soo uruuriyaan ay kula soo laabtaan Magaalada Jowahr. Hase yeeshee Prof. Cali Max’ed Geedi ayaa isagu ku adkeysanaya in si madaxbanaan uu u tago Muqdisho uuna kulamo la yeesho xubnaha ka soo horjeeda oo ku sugan Muqdisho. Khilaafkaas soo jiitamayey ayaa waxa uu keenay in uu mara badan dib u dhac ku yimaado imaatinkii Prof. Geedi uu ku soo gaari lahaa magaalada Muqdisho oo lagu waday inuu yimaado wakhti hore.
Maxamed dheere ayaa isna u muuqda ninka u sababta ah in lagu kala dareero magaalda Jowhar. Dagaaloogahaas ayaa wuxuu caburiyey taagerayaasha garabka Col. Cabdullahi, isaga oo xoogiisa u adeegsanaya siyaasada uu ku muujinayo in garabka Jowhar ay ku hoos jiraan magantiisa, damaanadna uu isagu ka yahay oo taladiisa la’aantiis aysan garabkaas qaadi karin wax tilaabo ah. Maxamed Dheere ayaa hadda waxaa ku foorarta eedeymo badan oo sababay in garabkoodu ay waayaan dhaqaale badan oo ay ka sugayeen wadamada caalamka. Hadda waxaa isaga ka sii fogaanaya taageerayaasha ku fikirkaa Col. Cabdullahi oo u arkaa Jowhar meel ay ku badan tahay halista caafimaadkooda iyo caburinta xoriyada fekerkooda.
Maxamed Dheere wuxuu horay uga fogaaday dagaaloogayaasha ay isku heybta yihiin ee ku sugan magaalada Muqdisho. Wuxuuna feker ahaan ku raacay Col. Cabdullahi in dagaaloogayaasha Xamar awood lagu muquuniyo oo dhegta dhiiga loo daro. Haddii uu Prof. Geedi isaga soo tago Jowhar, waxaan shaki lahyn in Col. Cabdullahi isna uu u kicitimayo gobolka Bari. Waayo taageerayaasha garabka Col. Cabdullahi ayaa aaminsan inaan la isku aamini karin Maxamed Dheere haddii ay fashilanto siyaasada garabka Jowhar, waxeyna cabsi ka qabaan inuu qarashka ku baxay joogitaankooda uu qaansheegasho naftooda rahmad ugu qabsado, iyaga oo weliba meesha aan ka saarin iska hor imaad uu dhexdooda ku daato dhiig.
Col. Cabdullahi oo ay u muuqato burburka garabka Jowhar ayaa si uu u yareeyo waxyeelada ka iman karta arrintaas wuxuu ka codsaday Col. Barre Hiiraale inuu dhexdhexaadin ka bilaabo isaga iyo dagaaloogayaasha Xamar, taas oo ay macnaheedu tahay inuu helo fursad ah ama inuu kula baxo ciidankiisa ama inuu ka helo ogolaasho inuu nabad ku yimaado Xamar inta aysan dhicin kalayaac ku yimaada garabka Jowhar oo hadda xaalkoodu cakiran yahay.
Burburka Garabka Jowhar ayaa waxaa soo hoobiyey dhaqaalihii laga sugayey adduunka oo loo diidey in la soo gaarsiiyo garabkaas, iyagoo horay ugu tashaday helitaanka lacagtaas oo ay u qorsheysneyd iney ku maalgeliyaan maleeshiyooyinka laga soo uruuriyey Bari iyo dhaqaale badan oo maamulka Jowhar laga amaahsaday.
Siyaasdda lagu maamulayo dowlada Soomaalida haddii Prof. Geedi loo madaxbaneyn lahaa waxaa hubaal noqon lahayd ineysan cakiranteen, sida ay maanta u murugeysan taheyna ay wax badan dhaami lahayd. Waxaa nasiib wanaag noqon lahayd in laga tanaasulo xooga loo isticmaalayo siyaasad ahaan, loona soo noqon lahaa dadaalka dib u heshiisiinta ay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed in si daacada looga dhex shaqeeyo. Waxaa rajo weyn laga muujiyey safarka Prof. Geedi uu ku imaanayo Muqdisho inuu isbedel ku keeno labada garab ee isku haya awooda Soomaalida, hogaanka dalkana lagu saleeyo danta guud oo ay meesha ka baxdo isqabqabsiga ku saleysan fikirka gaar ahaaneyd.